Uyenza njani into yokuFikelela kwi-imeyile kwiiTekhnoloji eziNcedisayo | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 29, 2019 NgeCawa, ngoFebruwari 3, 2019 Douglas Karr
Kukho uxinzelelo rhoqo kubathengisi ukuba bathumele kwaye basebenzise iitekhnoloji zamva nje kwaye uninzi lusokola ukugcina. Umyalezo endiwuva ndiphindaphinda kuwo onke amakhampani endi dibana nawo kukuba ngasemva. Ndibaqinisekisa ukuba, nangona benokuba njalo, kunjalo ke nakomnye umntu. Itekhnoloji iqhubela phambili ngesantya esingapheliyo ekunzima ukuhambisana nayo.
Oko kwathiwa, uninzi lweetekhnoloji ze-Intanethi zazakhelwe kwisiseko esasibandakanya bonke abantu, kubandakanya nabo bakhubazekileyo. Itekhnoloji yokuncedisa iyaqhubeka nokukhula ngokukhawuleza njengoko izixhobo kunye neetekhnoloji zisenza. Eminye imizekelo yokuphazamiseka kunye neetekhnoloji ezivumela abantu abanazo ukuba baziqhelanise:
Ingqiqo - iinkqubo ezifundisa kwaye zincedise inkumbulo.
Emergency - iimonitha zebhayometri kunye nezilumkiso ezingxamisekileyo.
Ukuva -Izinto zokuncedisa ukumamela, izandisi-lizwi, kunye noncedo kunye neenkqubo zokuthetha-nelizwi.
Ukuhamba -I-prosthesis, ukuhambahamba, izitulo ezinamavili, kunye nezixhobo zokudlulisa.
Visual - Iscreen readers, ii-embossers ze-braille, imiboniso yeBraille, izikhulisi, iibhodi zezitshixo ezithintekayo, uncedo lokuhamba kunye nobuchwephesha obunxitywayo.
Ukwenza iinkqubo zekhompyuter zifikeleleke, kukho izixhobo zekhompyuter kunye nesoftware evumela ukusetyenziswa kweekhompyuter ngabantu abakhubazekileyo nabaneziphene. Kubantu abanokukhubazeka ngokomzimba, ukulandelela iliso kunye nezixhobo ezinkulu zokufaka zinokunceda. Ukungaboni kakuhle, abafundi bekrini, itekisi-ukuya-kwintetho, izixhobo ezibonakalayo ezibonakalayo ezahlukeneyo, okanye imiboniso ye-braille ehlaziyayo iyafumaneka. Ukuphazamiseka kwindlebe, iincwadana ezivaliweyo zinokusetyenziswa.
I-imeyile ngoku sisixhobo esiphambili sonxibelelwano, ngakumbi kubantu abakhubazekileyo. Abathengisi banakho kwaye kufuneka benze, bayile kwaye baphuhlise imikhankaso ye-imeyile efikelelekayo. Le infographic evela kwiiMonks ze-imeyile ziya kukunceda ukonyusa ii-imeyile zakho ezibonakalayo, zokuva, zokuqonda kunye nokuphazamiseka kwemithambo-luvo.
Abathengisi be-imeyile kwihlabathi liphela bahlala bekhangela iindlela ezintsha zokuphucula ukuzibandakanya kunye nokusebenza kwemikhankaso yabo ye-imeyile. Ngokwenza njalo, abanye baye bamkela itekhnoloji yokwenza ukuba ii-imeyile zabo zifikeleleke ngakumbi kubo abantu abaliwaka lezigidi kwihlabathi eliphila nolunye uhlobo lokukhubazeka (umthombo: Umbutho wezeMpilo weHlabathi).
Iimonki ze-imeyile: Indlela yokwenza ii-imeyile zifikeleleke
Ezi nkcukacha ze-infographic yonke into isuka ekudalweni komxholo, isitayile, kulwakhiwo. Kananjalo, iinkcukacha ze-infographic ezinye izixhobo onokuzisebenzisa:
YIMA Isixhobo sovavanyo lokufikelela kwiWebhu. Olu lwandiso lwebrawuza lunokukunceda ukuba uvavanye kwaye ulungise imiba nge-HTML yakho.
Umjongi - Esi sixhobo sijonga iphepha elinye le-HTML ukuhambelana nemigangatho yokufikeleleka ukuqinisekisa ukuba umxholo unokufikelelwa ngumntu wonke. Ungayincamathisela i-imeyile yakho ye-HTML ngokuthe ngqo kuyo.
Ilizwi ngaphaya -I-VoiceOver yahlukile kuba ayisiyomfundi wesikrini esizimeleyo. Idityaniswe ngokunzulu kwi-iOS, kwi-MacOS kunye nazo zonke ii -apps ezakhelweyo kwi-Mac.
Umlandeli -Narrator sisixhobo sokufunda isikrini esakhelwe ngaphakathi Windows 10.
Thetha Umva -I-TalkBack ngumfundi wescreen sikaGoogle ofakwe kwizixhobo ze-Android.
Nantsi i-infographic epheleleyo, ukufikeleleka kwe-imeyile: Uyenza njani i-imeyile efanelekileyo efikelelekayo:
tags: Itekhnoloji yokuncedaAbalobi beebrailleukuphazamiseka kwengqondoukufikelela kwe-imeyileamaqhosha e-imeyileikopi ye-imeyileiifonti ze-imeyileimifanekiso ye-imeyileubume be-imeyileumbonoukungaboni kakuhleubuchwepheshe obunxibekayo